Guqula i-shp iye kwi-kml ... kunye nomsi opheleleyo-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Guqula i-shp ukuya ku-kml ... kwaye uphelele
I-Fdo2Fdo sisicelo esinomdla esingasebenzi kuphela ukuguqula iifayile kwifomathi yefomathi iye kwi-kml, njengoko iposti ibhengeza kakubi. Iba yeyenye ngoku emva kokufa kuka shp2kml ukuba ngokwemigaqo yomdali wayo, ngokusobala yaphela.
Xa ubona imisebenzi yayo, kuyamangalisa ukwazi yonke into ekucingayo ukuba iyisitayile sokusetyenziswa kwamahhala.
Ndiyifumene ngengozi eCartesia, yakhiwe Ukumkani uSl, ngamalungelo agcinwe ngokungqinelanayo malunga kwaye kwenzelwa ukuba kwenziwe ukuguqulwa kwedatha yendawo FDO (Faka iinkcukacha zeData) into engumsi yavela kusuka kwi-AutoDesk kunye neminye imizamo ephelile kwiMaphuGuide Open Source.
Ngoko ke kulindeleke ukuba esi sixhobo elula kuphela ukuguqula iifayile, ungakwazi ukuguqula data evela namaqonga data lweendawo ezahlukeneyo ezifana Oracle, Kumncedisi we SQL, Informix kunye MapGuide izifayile ezisecaleni obubobu njengoko KML kunye nemilo ifayile.
Ukuguqulwa kwezakhiwo ze-shp
Isixhobo esibonakalayo silula, ukuguqulwa ngalunye unokhetho lokuguqula iifolda ezipheleleyo okanye iifayile, umsebenzisi kunye nephasiwedi ngokubhekisele kwiziseko ezifana ne-Oracle. Kunokwenzeka ukwenza uguqulelo lwefom ye-shp kwiifomati zendawo ezifana ne:
sdf (AutoDesk ImephuGuide)
Ngendlela efanayo, banokuguqulwa kwiifomati ze-sdf ukuya
Ukusuka kwi-Oracle nedatha ye-Informix, kunye nezixhobo ezivakalisiweyo zingathunyelwa kuphela
Kufuneka uyibone !!!
Isicelo kufuneka siphicothwe kuba sinamandla amakhulu, okokuqala kuyamangalisa ukuba kutheni inobunzima malunga ne-30 MB kodwa emva kokuyibona isebenza, uya kufumanisa ukuba kutheni. Ungaqwalasela ifayile scheme apho iiparameters zokukopisha, ukongeza, ukutshintshwa kunye nezinye izinto ezininzi phakathi kwabaphathi beedatha ezahlukeneyo zichazwe.
Uncedo lwaphukile, ubuncinci andikwazi ukufikelela kulo kwifayile ye-.chm kodwa yeyona incinci kuyo. Ukongeza kwi-GUI ine-utility line command kunye ne-API.
Landa i fdo2fdo
Phantse imibuzo emi-3 yoyilo lweBhulorho
Ndingakanani ukuhlawula i-shp ukuya kmz ???
Ndifuna ukwenza uvavanyo kukuguqula i-shp kwaye ukuba kukho kwakhona i-kml ne-kmz
Igalelo elilunge kakhulu…. yingqondi
kukho inkqubo ebizwa ngokuba yi "shp2kml", cofa kugoogle
eli phepha alincedi ... kukho enye indlela esebenzayo ngakumbi gxuma !!!
inika impazamo ... bayakwazi ukuyilungisa ...
Ayisebenzi, inika impazamo.
Sawubona, ndifumana iphutha elifanayo xa ndiguqula i .shp kuya .kml, ithi "ayikwazi ukulayisha umnikezeli we-FDO".
Ndandifuna ukuguqula enye .shp ukuya kwi .kml kodwa ithi "ayikwazi ukulayisha umnikezeli we-FDO".
Akuyona ingxaki ukubeka iingqungquthela, ngokungakhathaliseki ukuba zinegalelo kuluntu.
Ukubulisa, kwaye uyabulela ngegalelo lakho.
Okokuqala, ndixolisa ukuba akunjalo ukubeka izixhumanisi kweli phepha, kodwa ndicinga ukuba kubalulekile kwabanye oogxa ukuthetha apho ndifumene khona inkqubo endiyichazile.
Ndazinikela umsebenzi wokuwukhangela kwakhona kwaye ndilapha idilesi
asebenza Dear, mna emasini ifayile ngqo kwiiforam ESRI sikuphendule ngokupheleleyo kakuhle shp ukuya kwifayile KML, ifayile kuthiwa Shptokml, ukubafuna naye khona ngenxa yokuba andithanga ndikukhumbule idilesi. Kodwa lilayishiwe kulo ArcGIS
Bendifuna ukuguqula enye i-.shp iye kwi-.kml kodwa indixelela ukuba "andikwazi ukulayisha umboneleli we-FDO".
Igalelo elihle kakhulu ... ndiza kuyizama..enkosi
Kuthotywa umthwalo, enkosi ngegalelo
Braulio Torres uthi:
Ndiyinciphisa kwaye ndibaxelele indlela endisebenzele ngayo
Khuphela ... ndizakuzama umbulelo ngegalelo
kulungile masijonge ukuba iyasebenza na ... graxz
Ndiza kukukhuphela ukuze ndivavanye.
Enkosi, iyakuba luncedo kakhulu….
Ndiyabulela .. Ndiza kuzama ..
Ewe mnandi kakhulu mnumzane!
Ndiyilanda kwakhona kwaye ndiya kuzama ngokukhawuleza njengoko ndinako.
"EthicalGEO" - isidingo sokuphonononga umngcipheko weendlela ze-geospatial